Global Voices teny Malagasy » Fanontaniana Mahamay Ny Sain’ny Venezoeliana : Hijanona sa Handeha ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Novambra 2016 10:01 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka
“Tsy nanomboka nanazava izany akory ny fo malahelo . Monina ao Berlin aho, kanefa ny toe-draharaha eto amin'ny fireneko manankorontana ny fiadanako kely eto amin'ny tontolo voalohany .” Sary nataon'ny mpanakanto Venezoeliana Leonardo González, nahazoana alàlana .
Miatrika ny fiakaran'ny vidim-piainana ambony indrindra  eto amin'izao tontolo izao i Venezoela amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fisian'ny fanafody . Raha toa mbola mifanome tsiny ny governemanta sy ny mpanohitra noho ny toe-karena mitotongana, nifandray tamin'ireo Venezoeliana ao amin'ny firenena kosa ireo Venezoeliana monina any ivelany, tamin'ny alalan'ny media sosialy mba hilazana fa misy ny tontolo hafa any ivelan'ny fireneny anaty krizy.
Niharatsy tao anatin'ny taona vitsivitsy ny krizy, izay nibahana tamin'ny endriky ny firenena tao amin'ny fampitam-baovao iraisam-pirenena ary namorona sehatra mankany amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mampahonena  , izay nanakoako tao anatiny sy ivelan'ny firenena .
Ho setrin'izany, mihevitra ireo Venezoeliana maro raha tokony hijanona izy ireo na handao ny firenena, ary hitady ravinahitra any ivelany. Namoaka ny sasany tamin'ny antontanisa  sy ny antony mandresy lahatra azy ireo ny fampitam-baovao an-tserasera tsy miankina iray Efecto Cocuyo araka ny fanazavan'ny manam-pahaizana mpikaroka tao Venezoela:
Azo zaraina ho sokajy telo ny fifindra-monina ao Venezoela: ny voalohany dia ny fifindra-monin'ireo olona mahitahita, izay nandao ny firenena teo anelanelan'ny taona 1999 ka hatramin'ny taona 2003 noho ny fiovana ara-politika noho ny fahatongavan'ny filoha Hugo Chavez […] Ny faharoa, teo anelanelan'ny 2004 sy 2009 izay olona nahavita fianarana tsara sy avo lenta. Ankehitriny, ireo tanora taranaka sy sarangan’ olona antonony no manao veloma ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Maiquetía [noho ny] toe-draharaha ara-politika, sosialy ary toe-karena ao Venezoela nanomboka tamin'ny taona 2010 .
Mazava tsara ny tenin'ireo izay mandao ny firenena tao amin'ny media sosialy, ary mampita ny fomba samihafa maha-sarotra ny fifindra-monina ho an'ny Venezoeliana izany. Hita matetika ao amin'ny fifanakalozan-dresaka an-tserasera sy ny fijoroana vavolombelona ny fankatoavan'ny vondrom-piarahamonina , ny fifandonana ara-kolontsaina , ary ny fifandraisan'ny ny krizy politika ao amin'ny firenena, nozarain'ny bilaogy iombonana Caracas Chronicles eo amin'ny tenirohy #NyKrizySyIzaho  ny sasany tamin'izany:
Nanoratra avy any Shily i Juan Cristobal Nagel, ary nanamarika fa mandratra ny ady ao Venezoela rehefa oharina amin'ny fiainana toa tsy misy olana :
Mivonto ny foko , vesaran'ny tsy fahafahako hametraka an'i Venezoela hobabeko.
Miverina in-dimy aman'enina izany toe-javatra izany isan'andro. Na izany mandritra ny fivoriana any am-piasana, na ao amin'ny fanehoan-kevitry ny mpianatra ao amin'ny lalantsara, na avy amin'ny antson'ny namana, mitovy hatrany ny fanontanian'ireo olona : “tena mahatsiravina, inona no hitranga?” Indray andro dia nanomboka niresaka tamin'ny mpangataka aho. Nanontany ahy ny fiaviako izy .”Venezoela? Indrisy, ratsy ny zava-misy any … “sady nanao fijery mampalahelo izy.
Torak'izany ihany koa aho . Rehefa miresaka momba izany dia misy fihetseham-po maharitra ora atsasak'adiny mampijaly ahy.
Feno fankasitrahana aho satria miahiahy momba izany ny olona, saingy tsy haiko ny tsy ho saro-piaro. Manohy ny fiainany izy ireo. Tsy mahatsiaro ho meloka isaky ny mandeha any amin'ny fivarotan-dehibe. Tsy voatery handany pesos aman’ hetsiny rehefa hividy fanafody ho alefa ho an'ny olon-tiany any an-tanindrazana. Tsy mandany ora maro izy ireo ho an'ny fianakaviany manoratra momba ny krizin'ny Venezoela.
Tsara vintana izahay. Tsy miaina ao anatin'ny krizy mivantana. Fa amin'ny lafiny kely ihany.
Tao amin'ny lahatsoratra iray hafa, mitantara indray  ny zavatra tsapany i Alejandro Machado  rehefa tsy tapaka nifandray taminy tamin'ny alàlan'ny teknolojia an-tserasera ny fianakaviany , na dia tsy ampy aza izany ho azy mba hahatsapana azy ireo ho akaiky:
Mahara-baovao izahay, fa tsy tena miaina izany. Miala voly izahay nefa tsy tena afapo. Miparitaka manerana ny kaontinanta ankehitriny ny fianakaviako, mampiasa ny vondrona karajia sy ny antso mivantana an-tserasera ho toy ny fitaovana tokana mba hitazomana hatrany ny fifandraisana manan-danja. Ankasitrahako ireo fifandraisana kely izay omen'ny teknolojia nomerika ireo, kanefa rehefa miaina ny tena zava-misy, dia tsy mahasolo azy ireo tanteraka izany.
Lasa izahay satria lasa ratsy loatra ny krizy, niroborobo tany an-kafa ny ravinahitra, ary naka izany izahay. Tena tsara vintana izahay teraka tato anatin'ity fianakaviana feno fitiavana ity ary tsy niharan'ny loza mihatra amin'ireo Venezoeliana isan'andro.
Indrisy, fa nanova ny fianakaviako ho amin'ny endrika virtoaly ny krizy, ary mampalahelo izany.
“Matetika , mahavita zavatra izahay na dia eo aza ny zom-pirenena fa tsy hoe noho ny aminy.”
Maro ny fitantarana feno fahatezerana, fa misy ihany koa miaraka amin'ny fanontaniana momba ny fonenana sy ny firenena, ny tanindrazana sy ny mari-panondroana. Nieritreritra momba izany tao amin'ny lahatsoratra nozaraina tao amin'ny Medium  i Hector izay nanazavany ny antony nandaozany ny firenena sy ny fahatezerana nateraky ny rafitra sy ny fifandirana ara-politika ;
Mihevitra aho fa tsy tokony hirehareha noho ny firenena nahaterahantsika fotsiny isika satria teraka tao, na hirehareha noho ny zava-bitan'ny mpiray tanindrazana miavaka izay mamirapiratra manerana izao tontolo izao ao amin'ny taranja isan-karazany. Nisy ireo zava-bita ireo, satria afaka tamin'ny fanangejana ara-tsosialy sy ara-moraly naraikitra tamin'ny zom-pirenena ary hiezaka mifanaraka amin'izany sy ny zavatra antenainy. Tsy kisendrasendra ny namenoan'ny mpanoratra na mpandinika Venezoeliana malaza ny asany amin'ny tsikera ara-tsosialy betsaka momba ny mari-panondroana nasionaly. Matetika isika no mahavita zavatra na dia eo aza ny zom-pirenena fa tsy hoe noho ny aminy.
Torolalam-piavotana ho an'ny Venezoeliana mivelona any ivelany
Maro ireo mampiasa ny media sosialy, tsy hitantara fotsiny ny zavatra niainany na hizara tantaram-pahatsiarovana, fa mba hanoro hevitra ny hafa ihany koa izay maniry ny hifindra any ivelany. Ho an'ny maro, miaina zavatra maro izay tsy maintsy nandalovan'ireo vondrom-piarahamonina tany amin'ny taonjato faha-20 tany Amerika Latina sy Eoropa ireo Venezoeliana, ary niteraka alahelo sy tsikera ny dona [vokatry ny fiovan-toerana]. Toy ny mahazatra, isan-karazany ireo fitantarana, araka ny hita tao amin'ny fantsona YouTube Diáspora Venezolana (Venezoeliana any ampielezana ):
Mihevitra foana izahay fa ny firenenay no tsara indrindra, ny kolontsainay no tsara indrindra, tsara avokoa ny kolontsaina rehetra raha ny marina. Tsy avy amin'ny toerana iray isika, fa avy amin'izao tontolo izao. Mila sahy ny olona, mandeha lavitra. Mino aho fa ny fiainana dia miompana amin'ny fahalalana, fitsidihana toerana, fifaneraserana amin'ny olona, fahitana kolontsaina maro, fijerena izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/28/92475/
 fiakaran'ny vidim-piainana ambony indrindra: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877
 fanitsakitsahana ny zon'olombelona mampahonena: https://www.derechos.org.ve/actualidad/las-ong-no-olvidaremos-a-los-violadores-de-ddhh
 anatiny sy ivelan'ny firenena: https://www.hrw.org/americas/venezuela
 Namoaka ny sasany tamin'ny antontanisa: http://efectococuyo.com/principales/724-de-los-venezolanos-que-emigraron-no-regresaran-al-pais-de-persistir-condiciones-actuales
 fankatoavan'ny vondrom-piarahamonina: https://globalvoices.org/2015/01/10/is-panama-still-a-melting-pot/
 mitantara indray: https://www.caracaschronicles.com/2016/06/21/virtual-families/
 nozaraina tao amin'ny Medium: https://medium.com/@zentraedi/yo-me-fui-porque-al-kiosco-de-las-empanadas-le-construyeron-un-boulevard-54af5fb0633d#.76a5n214s